अहिलेको सरकार माओवादी नेतृत्वमा छ । तर प्रश्न उठ्छ, आखिर १० वर्ष युद्ध गरेर आएका माओवादी कार्यकर्ताले चाहिँ के पाए ? अरुको त के कुरा, त्यहाँ रहेका टाठाबाठा अर्थात् पत्रकारकै पनि हालत खराब छ । सञ्चारमन्त्री माओवादीका तर महŒवपूर्ण र जिम्मेवार पदमा चाहिँ अरु दलका । कस्तो लाग्दो हो, डोकोमा रेडियो बोकेर क्रान्तिको बिगुल फुक्ने कमरेडहरुलाई जब राससको नेतृत्व कांग्रेसको हातमा छ । हालै सुरेन्द्र… विस्तृत समाचार
लाटो देशमा लफडै लफडा
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी पूर्वनिर्देशक मीना श्रेष्ठलाई हाल कामु महानिर्देशकको जिम्मा दिइएको छ । रिसेप्सनमा फोन गरेर महानिर्देशकज्यूलाई पाऊँ न भन्यो भने उहाँकै डाइरेक्ट नम्बरमा गर्नुस् भन्ने खबर पाइन्छ । उहाँको लाइनमा सम्पर्क हँुदैन, मोबाइल पनि उठ्दैन । उवाम संघसम्बन्धी जानकारी र कामका लागि खोज्दा सहायक निर्देशकमार्फत खबर गर्छु भन्ने तर खबर गर्नु त कता–कता दिनभर फोन नलाग्ने । बल्ल–बल्ल मोबाइल उठ्दा ‘मलाई थाहा छैन… विस्तृत समाचार
गुणराज भण्डारी अर्थ मन्त्रालयभित्र उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराको निजी सचिवको भूमिकामा थिए । तर, त्यहाँ माओवादीनिकट राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनको युनिट अध्यक्ष हुँदाहुँदै एयरपोर्ट भन्सारमा पु¥याइयो । आखिर सुन छिराउने बेला जो तैनाथ हुनु थियो । महिना दिनअगाडि ३४ किलो सुन विमानस्थलबाट बाहिरिँदा भण्डारी ड्युटीमै थिए । त्यो घटनाको अध्ययन गर्न भन्सार विभागले उपमहानिर्देशक सुमन दाहालको नेतृत्वमा टोली नै खटाएको छ । तर, छानबिनको दायरामा रहेका भण्डारीलाई… विस्तृत समाचार
नेपाली सेनामा बहुविवाह गरेका, यौनदुराचारी र भ्रष्टहरूको नालीबेली लामै छ । फरक यति हो कि यस्ता जर्नेल–कर्णेललाई कुनै कारबाही भएको देखिन्न । कारबाही सिर्फ तल्ला दर्जाका व्यक्तिलाई मात्रै हुन्छ । बहुविवाह गरेर सेनामा हालिमुहाली गरिरहेका प्रतिभाशाली व्यक्तिमध्ये ग्यारिजन गणका मेजर रेवतबहादुर बस्नेत पनि हुन् । उनले सेनामा जागिर खानुअघि नै आफ्नो जन्मस्थान रामेछापमा एक सोझी गाउँले केटीलाई १८ वर्षकै उमेरमा विवाह गरेका थिए । उनी… विस्तृत समाचार
विभिन्न मुद्दामा सजाय कटाइरहेका महिला जेलभित्रै ठगिएका छन् । समय–समयमा विभिन्न कारणले चर्चामा आइरहने जनता महिला केन्द्रीय कारागार फेरि पनि चर्चामा छ । कारागारभित्रका कैदीबन्दीको सहयोग र सुविधाका लागि नाइके कैदीबन्दीबाटै छानिन्छ । तर, लामो समयदेखि जेल प्रशासन र केन्द्र नाइकेको मिलेमतोमा अनियमितता हुँदै आइरहेको छ । जेलर, डिएसपी फेरिएपिच्छे नियम परिवर्तन हुँदै आइरहेको जेलमा हरेक नाइके आउटर निस्कने र लामो अनुभवका आधारमा बैदार, चौकीदार… विस्तृत समाचार
तब न सा’ब्नीको पाइन्छ तारिफ
सामान्यतया नेपाली सेनामा अधिकृतमा जागिर भएको १० वर्ष पूरा भएपछि उमेरहद ननाघुन्जेलसम्म वा सेवाबाट आएका अधिकृतको हकमा ३२ वर्ष उमेर पुगेपछि त्रिविअन्तर्गत स्ट्राटेजी स्टडी विषयको स्नातकोत्तर तहको जाँच हो, स्टाफ कलेज । जुन विषय नेपाली सेनाका अधिकृतको हकमा आगामी बढुवा तथा उज्ज्वल भविष्यका लागि अनिवार्य छ । यो शिक्षा हासिल गरेपछि फास्ट ट्र्याकअन्तर्गत आगामी प्रमोसनको बाटो खुला हुन्छ । स्वदेश तथा विदेशमा अनाश्रित गण, गुल्म… विस्तृत समाचार
प्रायः पाल्पालाई सांसद, राजनीतिक दलका नेताले ‘सीमित साधन–स्रोत’ भएको जिल्ला भनेर व्याख्यान् दिन्छन् । तर, यहाँ आउने प्रशासक र सरकारी अधिकारीले जनप्रतिनिधिको त्यो ‘सीमित साधन स्रोत’ वाला मन्तव्यमा टेकेर ब्रह्मलुट गर्ने गरेका छन् । बाहिर शान्त देखिने पाल्पाभित्र ठूलो चलखेल, अनियमितता, भ्रष्टाचार र आपराधिक खेल हुने गरेको छ । पाल्पामा हाल ७ वटा खानी उद्योगले उत्खनन गरिरहेका छन् भने २०÷२२ वटा परीक्षणपछि उत्खननको तयारीमा छन्… विस्तृत समाचार
विमानस्थलको कानुन, उनै जानुन्
एयरपोर्टमा पियनको जगजगी छ । डा. रामशरण महतको पालामा भर्ना भएका पियनहरुसँग भन्सारका हाकिम नै सरुवा गर्ने तागत छ । पूर्व सामान्य प्रशासन सचिव तथा स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका अध्यक्ष बालानन्द शर्मालाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार प्रमुख रहेका बेला एउटा पियन सरुवा गर्दा निर्णय बदर गरेर भन्सार छाड्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो । पियन कस्ता भने परपरैबाट आँखा सन्काएर इशारा गर्दा काम तमाम हुने । आफू त्यहाँ… विस्तृत समाचार
बारम्बार किन बाटो बिराउनु ?
सेभ द चिल्ड्रेनले ग्लोबल फण्डको अनुदानबाट क्षयरोगको क्षेत्रमा काम गर्न इच्छुक संस्थाहरुबाट आशयपत्र अक्टोबर २०१६ मा आह्वान गरेको थियो । जसबाट ब्रिटेन नेपाल मेडिकल ट्रष्ट र स्वास्थ्य अनुसन्धान तथा सामाजिक विकास मञ्चजस्ता संस्थाहरू दुई वर्षका लागि छनौट भएका छन् । २०१४ मार्चमा पनि यी दुई संस्था भक्तपुरबाट छानिएका थिए । जबकि ग्लोबल फण्डको मिति २३ सेप्टेम्बर २०१४ को इमेलमा बिएनएमटी÷एचईआरडीलगायत यसरी छानिएका संस्थाहरुलाई अयोग्य ठह¥याउनुका… विस्तृत समाचार
मंसिरको सैन्य भर्नामा पूर्वक्षेत्रको इटहरी केन्द्रमा खटिएका अधिकृत र सहयोगी अधिकृत, पदिक र बिल्लादारले आफ्नो मान्छे भर्ना गरेका छन् । पृतना केन्द्र भए पनि पृतनापतिले भर्नाको जिम्मेवारी राजदल गणपतिलाई दिँदै आएका छन् । घुमाउरो पारामा गणपतिमार्फत आफ्ना मान्छे भर्ना गराउने चाल त होइन यो ? बटुकदल गणका मेजर राजारामले साधारण नाम, थर नमिलेकालाई गाविस र जिप्रकाबाट नाता प्रमाणित गर्न पठाई, नाता प्रमाणित ल्याउँदा पनि अनेक… विस्तृत समाचार